Noocyada ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah | vfxAlert official blog
Noocyada ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah
Lacagta iyo suuqa maaliyaddu uma baahna oo keliya khibrad laakiin sidoo kale deebaaji ballaaran. Ikhtiyaaraadka ikhtiyaariga ah wuxuu kuu oggolaanayaa inaad hesho faa'iido deggan oo leh ugu yaraan maalgashi ku saabsan calaamadaha ganacsiga ee diyaarka ah. Laakiin ka hor intaanan si faahfaahsan ugu sheegin sida calaamadaha ay ugu shaqeeyaan ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah aan aragno noocyada calaamadaha ugu caansan.
Ereyga "ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah" looma dooran si wanaagsan. Ikhtiyaar ahaan macno ahaan isweydaarsiga qadiimiga ah waxaa loola jeedaa qandaraas kaas oo iibsade / iibiye suurtagal ah uu ku helayo xuquuqda uu ku iibsado / ku iibiyo hanti cayiman (badeecad, nabadgelyo, mustaqbal) qiimo lagu heshiiyey iyo waqti cayiman. Ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah (ama dijitaal ah), oo kuxiran xaqiiqda in shuruudaha la buuxiyo waqtiga go'an, waxay siisaa dakhli go'an ama ma keenayo, laakiin ma bixinayso xaq u lahaanshaha ku shaqeynta wax hanti maaliyadeed ah.
Taasi waa, ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah maahan nabadgelyo soosaarid, laakiin waa nooc fudud oo qandaraaska loogu talagalay farqiga (CFD).
Waxaan ku kala soocnaa xulashooyinka xuduudaha soo socda
leh heer go'an; leh heerka sabayn;
«Gaaban» oo uu dhacayo 30-60 sekan, laakiin ugu badnaan illaa dhammaadka maalinta ganacsiga ee hadda jira; dhicitaanka 1 maalin ilaa 365 maalmood (dhexdhexaad iyo waqti dheer); dhicitaan go'an - macaashka ama lumintu waxay dhacdaa oo keliya markay dhacdo ikhtiyaarka; Fulinta hore - xaaladaha qaarkood, ikhtiyaarku wuxuu kuxiranyahay faa iidada, khasaaruhuna waxaa lagu go'aamiyaa oo keliya dhamaadka muddada xulashada.
Cl xulasho ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo loogu talagalay newbie's
Kac / Fall (WAC / PUT, Lacag-Ama-Waxba)
Ganacsadaha ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ah waa inuu saadaaliyaa jihada dhaqdhaqaaqa qiimaha oo u furaa ikhtiyaarka midkood koror ama hoos u dhigis.
Markaad go'aamiso saadaashaada, dooro «WAC» haddii aad u malaynayso in qiimaha hantida la doortay uu sare u kici doono, ama «PUT» haddii aad aragto rajada inuu hoos u dhacayo. Qadarka macaashka ayaa horay loogu heshiiyey oo wuxuu ku qeexay dillaalku dalabkiisa, badiyaa inta udhaxeysa 75-85%. Haddii saadaashu khaldan tahay, dallaalku wuxuu qayb ahaan dib ugu soo celin karaa maalgashiga-10-15% (dhamaadka usbuuca, ciidaha iyo inta lagu jiro suuqa aan firfircooneyn, tirada lacag bixinta ee macaamil ganacsi aan faa'iido lahayn ayaa isbeddelaya).
Muddada dhicitaanka ee xulashooyinka noocan oo kale ah ee ballaaran: laga bilaabo 5 daqiiqo illaa 365 maalmood, gaar ahaan tan iyo markii qaar ka mid ah dallaaliintu ay u oggolaadaan inay iibiyaan xulashooyinkaas ka hor inta uusan dhicin. Tani waxay suurtogal ka dhigeysaa in la yareeyo qasaaraha suurtagalka ah (iyo mararka qaarkood xitaa faa'iido!), Laakiin aan ka badnayn, horay loo sii wado dakhliga go'an.
Caqabad sare / Hoose (Xulashada Isbaarada Dijitaalka ah)
Haddii qiimaha hantida ganacsi waqtiga uu dhacayo uu si aad ah uga sarreeyo (ama aad uga hooseeyo) marka loo eego ikhtiyaarka lagu dejiyay furitaanka xannibku wuxuu noqon doonaa mid faa'iido leh. Markaad ka durugto caqabadda sicirka hadda jira (xagga saadaashaada, dabcan!), Ayaa sii kordheysa faa'iidadaada suurtogalka ah. Laakiin ha iloobin - suurtagalnimada helitaankeeda sidoo kale hoos ayuu u dhacayaa marka loo eego cabbirka caqabadda.
Ikhtiyaarku wuxuu ku dhammaanayaa faa'iido marka qiimaha taabto / uusan taaban caqabadda la cayimay, oo ka sarreyn karta ama ka hooseyn karta qiimaha furitaanka.
«One Touch» ayaa kuu oggolaaneysa isla waqtigaas in lagu kasbado wax ka badan xulashooyinka caadiga ah ee leh dhicitaanka go'an. Sida ugu dhakhsaha badan qiimaha taabtay caqabadda, macaamilku wuu xiran yahay oo wuxuu ku yaal meheradda ganacsiga binary , waxaad furi kartaa mid cusub oo loogu talagalay faa'iidada la helay. Waxa kale oo aad isticmaali kartaa xeeladaha wararka marka aad u badan tahay inaad u dhaqaajiso qiimaha hal dhinac ka dib marka la sii daayo dhacdo aasaasi ah iyo waliba intaa ka dib macaashka hal-taabashada ah waad furi kartaa «Maya Taabasho» oo ka dhan ah isbeddellada.
Muhiimad ahaan, dallaaliintu inta badan kuma oggola inay kuu dhigaan caqabad ka fog qiimaha hadda jira ama ay yareeyaan macaashka iyaga saaran illaa 45% -60%. Bilaabeyayaashu waa inay ku bilaabaan noocyada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah oo kaliya khibrada lagu daro calaamadaha ikhtiyaar ikhtiyaar ikhtiyaari ah !
Xulashooyinka binary Range
«Soohdinta Ka Bax» - Qiimaha wuxuu ka baxsan yahay inta ka baxsan ka dib marka uu dhaco. Macno malahan inta jeer ee qiimaha uu ka maqnaa meel ka baxsan inta ikhtiyaarigu furan yahay, waxaa kaliya oo muhiim ah meesha qiimaha uu ku sugan yahay waqtiga uu xiran yahay.
«Soohdinta Gudaha» - ikhtiyaarrada beddelka nooca "Boundary Out" - ka dib dhammaadka ikhtiyaarka, qiimaha ayaa ku sii jiri doona inta u dhexeysa.
Haddii labadii nooc ee hore taabashada carqaladuhu aysan macno lahayn, kuwa soo socda waxay kuxirantahay sida ikhtiyaarku udhamaado:
«Wuxuu dhexeeyaa» - faaiido marka qiimuhu taabto caqabadaha kore ama hoose inta lagu jiro xulashada;
“Dibedda Aadaa” - qiimaha ayaa weli u dhexeeya caqabadaha (iyada oo aan la taaban) wakhti kasta illaa ikhtiyaarku ka xirmayo.
Fursadaha ikhtiyaariga ah ee Turbo (60 sekan) . Khamaarka ugu badan - waa qalab u gaar ah ganacsiyada degdegga ah iyo isla isla guushaas. Furitaanka / xirida xirfadaha heerkan waa soo jiidasho, laakiin xiisaha waxay u horseedi kartaa khasaaro weyn.
Muhiim: inta lagu jiro sii deynta (fiiri jadwalka taariikhda!) Wararka maaliyadeed, inta badan dilaaliinta 5-20 daqiiqo ka hor warka iyo in badan oo ka mid ah wax soo saarkooda ayaa xayiraya marinka "60 ilbiriqsi".
"Dhise" . Malaha xulashada ugu dimuqraadiyadda badan - ma jiro macaash go'an; heerka dakhliga waxaa lagu doortaa furitaanka. Ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah leh u muujiyo macaamil ganacsiyeed
Laakiin, waxaa jira waqti xaddidan oo xaddidan - sida caadiga ah, macaamillada noocan oo kale ah waxaa la furaa ugu yaraan 30 daqiiqo, ugu badnaanna waa 4-5 saacadood.
Dhaqdhaqaaqa intraday ee kalfadhiyada ganacsiga. Ha iloobin in ugu horreyntii aan ku shaqeyno waqtigii loogu talagalay, iyo haddii ay jiraan dhaqdhaqaaqyo soo noqnoqda, waxay siinaysaa fursado badan oo ku saabsan sida lacag looga sameeyo ikhtiyaarrada ikhtiyaariga ah .
Fursadaha Rise / Fall (CALL PUT), qalabka leh isbeddellada xilliyada adag ee xilliyada M5 iyo kuwa ka sarreeya ayaa ku habboon. Ka Ganacsi xilliyada yar yar ayaa sidoo kale suurtagal ah, laakiin halista khasaaruhu sidoo kale wuu kordhayaa. Way kafiican tahay in la hubiyo inay jiraan dhaqdhaqaaqyo hagitaan maxalli ah oo joogto ah oo soconaya ugu yaraan 5-7 baararka qiimaha;
Fursadaha Range iyo caqabadaha waxay u baahan yihiin isbeddel ku filan oo sarreeya, taas oo suurtagal ka dhigaysa in si buuxda looga ganacsado meelaha dhaqdhaqaaqa sagxadda (fidsan);
Ka falcelinta daabacaadda wararka aasaasiga ah. Waxaan eegeynaa sida sicirka u dhaqaaqo ka dib markii la siidaayay: dhinacyo badan ama si cad oo hal jiho ah, u horseedaya arrimo aasaasi u ah sameynta isbeddello cusub iyo in kale. Tirakoobka ugu yaraan 1-2 sano ee la soo dhaafay.
Jadwal ganacsi oo habboon oo ay tahay in lagu daro habka nolosha. Tusaale: haddii inta badan calaamadaha ikhtiyaariyada ikhtiyaari ikhtiyaari ah lagu shaqeeyo kalfadhiga Aasiya, ka dib ganacsatada ku nool qaybta Yurub waa habeen qoto dheer oo aan ku habboonayn qof walba.
Talada ugu dambeysa : nooc kasta oo ikhtiyaar ah, waxaa muhiim ah in la doorto dillaalka saxda ah. Waxay kuxirantahay sida ugu dhakhsaha badan booska uu u furi doono / xiri doono sidaas darteedna faa iido.